Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ilizwe | Ummandla » i-USA » Uhlaselo lweSinagoge yaseTexas engaqhelekanga: Zonke iimbono zezam ngokungqongqo
NgoMgqibelo ibikukuqala kwempelaveki kaMartin Luther King.
Loo mpelaveki ifanele ibe lixesha lokucinga kunye nexesha apho uninzi lwezizwe neenkonzo zonqulo ezihlala eUnited States zithatha ixesha lokucinga ngendlela esinokusebenzela ngayo sonke umanyano olugqibeleleyo.
Ngelishwa, impelaveki yonakaliswe yimeko yokubanjwa kwe-hostage Ibandla laseBhete kwaSirayeli.
Inxalenye enkulu yayizolo, kuquka ngobusuku bangoMgqibelo, uninzi lwesizwe lwalunikel’ ingqalelo koko kwakusenokuba kwakusenzeka kwiBandla laseBhete kwaSirayeli. Okuvuyisayo kukuba, akukho namnye kubathinjwa owenzakeleyo.
Ngeli xesha sibhalayo, asinazo iinkcukacha ezipheleleyo. Kuninzi kuseyintelekelelo. Umenzi wobubi wachaza kwasekuqaleni ukuba wayelindele ukufa. Ngaba olo lindelo yayisisibhengezo, umnqweno wokuzibulala, okanye umnqweno wokuba ngumfeli-nkolo (okanye indibaniselwano ethile)?
Iinjongo zesenzo sakhe azikacaci. Into ecacileyo kukuba izolo ayizange ilandele iipateni eziqhelekileyo ze-Al Qaeda kwaye iziganeko ezibuhlungu zayizolo zivelise imibuzo emininzi kuneempendulo. Nangona abezomthetho bekhuphe ulwazi oluphangaleleyo, kucacile ukuba abezomthetho benze umsebenzi oncomekayo.
Amapolisa kamasipala, karhulumente kunye namapolisa ayenomonde kwaye asebenzisa ixesha njengesixhobo. Zonke iinxalenye zogcino-mthetho zasebenza kunye, kwaye abaxoxisana nabathinjwa babebalaseleyo. Unyanzeliso lomthetho kuwo onke amanqanaba lufanele ukunconywa kunye nombulelo wethu phezu kwento ebinokuba yintlekele.
URabi uCytron-Walker wayefumene uqeqesho olukhethekileyo lokujongana nesiganeko esinjalo. Nangona kubuhlungu ukuba amapolisa kufuneka aqeqeshe abefundisi ukuze bajongane nezi ntlobo zeziganeko, uqeqesho lwasebenza kwaye amajelo abika ingxelo yokuba kulo lonke eli xesha uRabbi uCytron-Walker wayezolile kwaye enengqiqo.
Esi siganeko, nangona kunjalo, siphakamisa imibuzo emininzi kwaye sikwabonelela ngemingeni emitsha. Phakathi kwemibuzo ekufuneka ibuzwe yile:
Ngokuqhelekileyo, ukufa kwenzeka ekuqaleni kwesiganeko sobugrogrisi. Ukuba umenzi wobubi ebefuna ukubulala kwakutheni engazange ayenze le nto ekuqaleni kwesiganeko?
Zaziyintoni iinjongo zomenzi wobubi? Ekuqaleni wafuna ukuba kukhululwe umnqolobi ogwetyiweyo, uGqr. Aafia Siddiqui. Nangona kunjalo, wayefanele azi ukuba akukho thuba lokuba oku kuya kwenzeka. Ngaba zazikho ezinye iinjongo? Ngaba olu yayiluvavanyo olutsha lohlaselo lwabanqolobi? Ngaba zikho ezinye iinjongo esingaziqondiyo?
Kwakutheni ukuze akhethe indlu yesikhungu? Ngaba esi yayisesinye isenzo sokuchasa amaYuda? Kwakutheni ukuze ayikhethe iBhetele yakwaSirayeli? Iinkonzo zayo bezikwi-intanethi nto leyo ethetha ukuba elona nani lamabandla akhoyo linokuba lincinane. Kwelinye icala, kwakukho abantu abangaphezu kwe-1,000 XNUMX ababesiya kwiinkonzo zakusasa zeShabbat kwi-intanethi. Ngaphezu koko, iingxelo zibonise ukuba umenzi wobubi wayefuna "ukuhlasela" indlu yesikhungu ekufutshane neDallas-Ft. Sifanelekile isikhululo seenqwelomoya? Ukuba kunjalo, kutheni le nto ibalulekile kuye? Okumangalisayo kukuba, lo menzi wobubi wabonakala emthanda urabhi yaye wabonisa ukuba wamkelekile eBeth Israel. Inkoliso yabanqolobi ayiwathandi amaxhoba abo. Ngaba ezi mvakalelo zaziyimiqondiso yokungazinzi kwengqondo okanye uhlobo olutsha lobugrogrisi? Ezi zibakala zingadityaniswanga zithetha ukuba olu hlaselo lwabanqolobi aluzange lulandele iindlela eziqhelekileyo. Kuyathandabuzeka nokuba olu hlaselo lwaluchasene namaYuda kuphela, okanye umenzi wobubi wakhetha indlu yesikhungu ukuba yaziwe kakhulu. Uhlaselo lwe-Al Qaeda luhlala lufuna ukupapashwa njengesixhobo sokugaya.
Nangona ngoku kucacile ukuba umenzi wobubi wayengumBritane asazi ukuba loo ngcezu yedatha nayiphi na isiphumo. Abanye baye baqaphela ukuba i-US inomda osemazantsi ovulekileyo, ukuba ubuncinci abantu abazizigidi ezi-2 bangene ngokungekho mthethweni ukusukela nge-20 kaJanuwari 2021, kwaye aba bantu baphuma kwizizwe ezingaphezu kwe-100. Le nyaniso yokugqibela ikhokelela kumbuzo owongezelelekileyo, bafumene njani ukusuka kwilizwe labo ukuya kumda wase-US-Mexican? Ngubani oxhasa ngemali yokuya eMexico okanye kwisizwe esikuMbindi waseMelika kwaye ngaba bangena kwezi zizwe ngokusemthethweni okanye ngokungekho mthethweni?
Ngaba kukho ubudlelwane phakathi kwentlekele yase-US ephuma e-Afghanistan kwaye kwenzeke ntoni izolo? Ngaba i-US ibonakala ibuthathaka kangangokuba i-Al Qaeda isebenzise esi siganeko njengendlela yokuvavanya?
Ngaba kukho ubudlelwane phakathi kwesi siganeko kunye ne-US eqhubekayo yolwaphulo-mthetho kwizixeko ezikhulu? Ukujonga i-US evela phesheya, ngaba i-US ibonakala ibuthathaka kangangokuba abo bafuna ukwenza okubi, ngakumbi abantu base-Irani, kodwa nabanye, bafuna ukulinganisa isisombululo sase-US?
URabi uCytron-Walker ngumntu odumileyo nothandwayo kulo lonke elase-Colleyville yamaJuda kunye noluntu ngokubanzi. Ungumhlobo wentloko yamapolisa, kunye nesebe lawo lamapolisa, ukhuthele kwimisebenzi yeenkolo ngeemvaba, kwaye uthandwa kakhulu kuluntu lwamaMuslim.
Ibutho lamaSilamsi lasekuhlaleni lema kunye namaYuda.
Kunokutshiwo okufanayo kuluntu jikelele lwaseColleyville kunye noluntu lwamaKristu. Olu luntu lwakhawuleza lwanika inkxaso kunye nomanyano.
Kunokutshiwo okufanayo kwiDallas-Ft enkulu. Uluntu oluxabisekileyo kunye neLizwe laseTexas.
Nangona kungacacanga ukuba olu hlaselo lwaluchasene namaYuda kangakanani, ukuchaswa kwamaYuda yingxaki enkulu yentlalontle kulo lonke ihlabathi laseNtshona.
Ezinye izifundo zokuqala ezifundiweyo
Izindlu zesikhungu zengingqi (kunye namanye amaziko enkolo) kufuneka abe nobudlelwane obusondeleyo kunye nokunyanzeliswa komthetho wasekhaya kunye norhulumente.
Amaziko oluntu angamaYuda, izindlu zesikhungu kunye namaziko kufuneka abe nezicwangciso ezipheleleyo zokhuseleko kwaye acinge ukuba "ingenzeka apha."
Kukho imfuneko yokhuseleko olungcono kwizindlu zesikhungu. Ngumbuzo ovulelekileyo wokuba ngubani ofanele ukuxhotyiswa kwaye angafanelanga ukuba axhobe, kwaye yeyiphi imithetho yompu emayiphunyezwe okanye ingaphunyezwa. Iimpikiswano zinokwenziwa ngenxa yokuba mininzi kakhulu imipu eUnited States. Ingxoxo ephikisayo inokwenziwa yokuba izindlu zesikhungu/izibonelelo zoluntu kufuneka zibe nabantu abachongiweyo abakwaziyo ukusebenzisa imipu kwaye baye bajonga imvelaphi engqongqo. Akukho mimandla yompu/yempu inokuba yingozi ngakumbi xa kuqwalaselwa imiba echasene namaYuda. Abanqolobi kunye nabaphuli-mthetho bayayihoya "akukho mithetho yemipu" kwaye bayazi ukuba abantu abakwimimandla engeyiyo imipu abakwazi ukuzikhusela.
Izixhobo ezingenzi nto ezifana neekhamera zinceda ekuhlalutyeni isiganeko kodwa aziyi kuluphelisa uhlaselo lwabanqolobi.
Abasebenzi bezindlu zesikhungu bafuna uqeqesho olukhethekileyo ukuze babone iingxaki ezisenokubakho.
Izinto ezifana noobhaka kufuneka zishiywe kude neendawo apho abantu bahlanganisana khona.
Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba abeendaba babika isiganeko ngokuchanekileyo kwaye ngaphandle kokukhetha. Uninzi lwemithombo yeendaba yaseMelika yenze umsebenzi olungileyo, kwelinye icala zombini iiReuters kunye neBBC zenze umsebenzi onganelanga kakhulu.
Oku ngakumbi: Mekhsikho | Reuters | Texas | Afghanistani | BBC
Abasebenzi bezempilo: Ukuguqula uRoe v. Wade kuyingozi kwaye akukho sikweni Texas|
Oogxa bakaHeathrow badlala indima enkulu kuthotho olutsha lweBBC 1 BBC|
Ihotele yaseBlossom iHouston ibonelela ngePhakeji yokuHlala ixesha elide Texas|
Afghanistani BBC Mekhsikho Reuters Texas
Uphononongo olutsha lweKlinikhi yonyango lwamathumba esibindi
Umongameli weHlabathi we-SKAL wazisa uKhenketho olutsha...
UQueen Elisabeth 2 ngoku yiHotele yaseAccor
Izifo Zezintso: Umngcipheko weMpilo othuleyo kwihlabathi
Iprotheyini eSiseko yeWheyi ihlukanisa iSabelo seMarike, iGlobal...
IRussia ivala iinqwelomoya zaseBritane kwindawo yayo yomoya
Inyanga yeMbali eMnyama yaseMelika eUganda
Isicelo esitsha seChiza kwizigulana ezineFollicular...
Kutheni abemi base-US kufuneka bemke eRashiya
UDavid Feder uthi:
NgoJanuwari 17, 2022 kwi-12: 47